Njikwa xxx.docx enweghị ike imeghe n'ihi enwere nsogbu na ọdịnaya ya
Home ngwaahịa DataNumen Word Repair Njikwa xxxx.docx enweghị ike imeghe n'ihi enwere nsogbu na ọdịnaya ya
Ozi zuru ezu banyere "Faịlụ xxxx.docx enweghị ike imeghe n'ihi na enwere nsogbu na ọdịnaya" Error
Mgbe ị na-emepe akwụkwọ Okwu mebiri emebi na Microsoft Word 2007 ma ọ bụ nsụgharị dị elu, ị ga-ahụ ozi njehie na-esonụ:
Enweghị ike imeghe faịlụ xxx.docx n'ihi na enwere nsogbu na ọdịnaya ya.
(Nkọwa: Faịlụ ahụ rụrụ arụ ma enweghị ike imeghe.)
ebe 'xxx.docx' bu ihe ederede Okwu ojoo.
Pịa bọtịnụ “OK”, ị ga-ahụ ozi njehie nke abụọ:
Okwu achọtara ọdịnaya a na-apụghị ịgụta agụta na xxx.docx. You chọrọ ịghachite ọdịnaya nke akwụkwọ a? Ọ bụrụ na ị tụkwasịrị obi na akwụkwọ a, pịa Ee.
Pịa bọtịnụ “Ee” ka Okwu wee nwetaghachi akwụkwọ ahụ.
Ọ bụrụ na Okwu adịghị arụzi akwụkwọ nrụrụ aka, ị ga-ahụ ozi njehie nke atọ. Ihe zuru ezu kpatara ya ga-adịgasị iche dabere n'ọnọdụ dị iche iche nke nrụrụ aka ahụ, dịka ọmụmaatụ:
(Nkọwa: Microsoft Office enweghị ike imeghe faịlụ a n'ihi na ụfọdụ akụkụ na-efu ma ọ bụ ghara ịdị irè.)
N'okpuru ebe a bụ nlele ihuenyo nke njehie ozi:
Oge ụfọdụ Okwu ga-enwe ike iweghachite ederede ederede site na akwụkwọ rụrụ arụ, mana enweghị ike weghachite foto ụfọdụ. N'ọnọdụ dị otú a, ị nwekwara ike iji DataNumen Word Repair iji weghachite foto ndị ahụ.
Ihe nlere ederede ederede ederede Faịlụ natara site na DataNumen Word Repair